THAZINRANANT: 7/10/11 - 7/17/11
Really Useful English Idioms 13
Old Mr Brown has been with the company fo ryears.He's pretty useless,but he survives
because the manager has s soft spot for him.
There are two bossy middle-aged women who are always at each other's throats about
There'sanice girl who started last week and isabreath of fresh air.
haveasoft spot for = like,care about
at each other's throats= arguing
breath of fresh air= pleasantly different
နောက်နေ့ကစပြီး Dating and romance ကိုစတင် တင်ဆက်ပါမယ်။
Posted by သဇင်ရနံ့at 11:41 No comments:
Really Useful English Idioms 12
takearain check ဆိုတဲ့စာကားစုကတော့ keep an invitation open လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ပွင့်ပွင့်
fingers crossed ဆိုတဲ့အီဒီယမ်အသုံးအနှုံးက let's hope for the best ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါတယ်။
on me ကတော့I'll pay ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်တခုခုပေါ်မှာအတူတူစားကြ သောက်ကြတဲ့အခါဒီဝိုင်းကိုမိမိ
How can you say ¨no¨to an invitation for now but keep the invitation open for another
.Can I takearain check?
What can you say if someone invites you to an event that is dependent on something else,such as good weather.
.(Letæs keep our) Fingers crossed.
And if someone offers to pay for drinks orameal,but you want to pay?
.This is on me.
Posted by သဇင်ရနံ့at 11:28 No comments:
လောကမှာ ယုံကြည်စရာတွေ ကိုးကွယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။မိရိုးဖလာ အစဉ်အလာအတိုင်း
ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသလို အသက်အရွယ်လေးရလာမှကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် သဘောပေါက်နားလည်ပြီး
ဘယ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ရမှာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မှာကတည်းက
ဘုရားကိုမေးလို့ ဘုရားက ဖြေခဲ့ဘူးတာရှိပါတယ်။မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ပုရပိုဒ်တယောက်ဖြစ်ပြီး မြတ်စွာ
ဘုရား ပရိတ်နိဗ္ဗါန်ပြုခါနည်း မိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲလိုတော့တဲ့အချိန်ပါ။ပုရပိုဒ်ကြီးကအရှင်ဘုရားလော
ကမှာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့အယူဝါဒတွေကလည်းများပါတယ်ဘုရား။ သူတို့ကလည်းသူတို့ဘာသာ
ဘုရား လို့ လျှောက်တော်မူတယ်။
မဟာဂရုဏာ တော်ရှင် သုံးလောကထွတ်ထား မြတ်ဘုရားဟာပရိတ်နိဗ္ဗါန်ပြုဖို့အတွက်အချိန်ပိုင်းလေး
ပဲလိုတော့တဲ့အချိ်န်မာတောင် သတ္တ၀ါတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့စကားကိုပြောဖို့ မငြင်းပယ်တော်မူပါ
“ချစ်သား ဘာသာတခုကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တော့မယ်ဆိုယင်အဲဒီဘာသာမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်
လွပ်မြောက်မှုကို ပေးနိုင်တဲ့တရားရှိသလားကြည့်။ရှိယင်ကိုးကွယ၊်မရှိယင်မကိုးကွယ်နင့်” တဲ့။
မြတ်ဗုဒ္ဓက ငါ့သာသနာသာ ကောင်းတယ်ကွာ အဲဒါပဲကိုးကွယ်ပါလို့ တဘက်သတ်မပြောပါဘူး။ လော
ကမှာ အတုမရှိတဲ့ဘုရားပါ။သိစရာမှန်က မြူမျှမကျန်အောင် အကုန်သိတော်မူတဲ့ဘုရားက စကားကို တဘက်သတ်မပြောပါဘူး။
ကာလမ သားတွေကိုဟောခဲ့တုန်းကလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။သူများပြောတိုင်းလဲ မယုံနင့်၊မိဘဘိုးဘွားအစဉ်
တဲ့။ကိုယ့်ရဲ့အသိဥာဏ်နင့်တကယ်ပိုင်းခြားသိအောင်လုပ်ပြီး သိတဲ့အခါမှယုံပါလို့ မြတ်ဗုဒ္ဓကမိန့်တော်မူ
မကိုးကွယ်နင့်တဲ့။ဘုရားဟောတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ကယ်တင်နိုင်တဲ့တရားရှိ မရှိကြည့်လို့
ကြမ္မာကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရတာနင့် သူများလုပ်သမျှခံဖို့စောင့်နေတာဘယ်ဟာက ပိုပြီးအဆင့်အတန်း
မြင့်သလဲ။ဘယ်အရာက လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ လူ့အစွမ်းအစကိုအားပေးတဲ့ ဘာသာအယူဝါဒဖြစ်သလဲဆိုတာ
ဆေးတခုဆိုတာ လူနာကို ဒီဘ၀ပစ္စက္ခမသေခင်မှာတင်ဆေးစွမ်းကိုပြနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။သေပြီးတမလွန်
ကိုရောက်ပြီးမှ ဆေးစွမ်းကို ပြနိုင်တယ်ဆိုတာ သိပ်အားမကိုးလောက်ပါဘူး။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်
မှာ ဧဟိပတ်သိကော လာပါ ယူလှည့်ပါ စမ်းလှည့်ပါလို့ ခေါ်ရဲ၊စမ်းရဲ လက်တွေ့လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းရဲတဲ့
မြတ်ဗုဒ္ဓက လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ စတဲ့တရားတွေကိုငြိမ်းအေးအောင်လုပ်ဖို့ဟောတော်မူပါတယ်။
လောဘအလိုအတိုင်းလိုက်နေယင် သတ္တ၀ါတွေမှာ သံသရာစက်ဝန်းကဘယ်တော့မှလွတ်မှာမဟုတ်
တော့ဘူး၊ဒါကြောင့်ဒီလိုမဖြစ်ဖို့အတွကလောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ စတဲ့တရားတွေကိုအားပေးတဲ့ တဏှာ
ကိုသတ်နိုင်ရမယ်။လိုအင်ဆန္ဒတွေဆိုတာ တဏှာက ခိုင်းနေတာသာဖြစ်တယ်။တဏှာက ခိုင်းတယ်
ကြတဲ့အတွက် သင်္ခါရ ပစ္စယာ ၀ိဥာဏ်နမ် ဆိုသလို ဒီကံသတ္တိတွေကြောင့်ပဲ တနည်းအားဖြင့်ကံမ စွမ်း
အင်ကြောင့် နောက်တဘ၀ ကိုရဖို့အတွက် စုမိဆောင်းမိတွေဖြစ်ကုန်တယ်။လော၊ဒေါသ မောဟနင့်
သေတဲ့သတ္တ၀ါတယောက်ဟာ သေယင် အပယ်လေးဘုံ(ငရဲ၊တိရစ္ဆာန် ပြိတ္တာ အသူရကယ်)ကိုရောက်
ဖို့သေချာပါတယ်။ အပယ်ငရဲကိုရောက်ပြီးတဲ့သတ္တ၀ါတယောက်ဟာ သုဂတိဘုံ(လူ၊နတ်ဗြဟ္မာ)ကို
သက်ရှင်နေရတာမို့အပါယ်ဘုံဘ၀က မတက်နိုင်ကြတော့ပဲ အပယ်ဘုံမှာပဲ လည်ပြီးယင်းလည်နေကြ
ဒီလိုနင့် သတ္တ၀ါတွေဘ၀သံသရာ မှာ ဆုံးစ မမြင်နိုင်အောင်မျောနေ လည်နေလိုက်ကြတာ ဘယ်ကစ
လို့ စမှန်းတောင်မသိနိုင်တော့လောက်အောင် ရှည်လာခဲ့ကြပြီလို့ဘုရားကဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အပါယ်ဘုံကိုရောက်သွားတဲ့သတ္တ၀ါတကောင် သုဂတိဘုံကိုရောက်ဖို့ဘယ်လောက်ခက်
တယ်ဆိုတာကို မြတ်ဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့ လိပ်ကန်းဥပမာလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ပင်လယ်
သမုဒ္ဒရာအောက်ကြမ်းပြင်မှာ မျောချင်ရာကိုမျောနေတဲ့ လိပ်ကန်းကလေးတကောင်ဟာ အနှစ်တရာ
လောက်ကြာတော့ တခါအသက်ရှူဖို့တက်လာတယ်တဲ့။ဒီလိုတက်လာတဲ့အချိ်န်မာ အပေါက် တပေါက်
ပြင်ထက်ကိုအသက်ရှူဖို့တက်လာတာနဲ့ လိပ်ကလေးရဲ့ခေါင်းဟာ ဒီတံပိုးပေါက်ထဲကိုစွပ်မိတာကမှဖြစ်
ချင်ရင်ဖြစ်နိုင်အုံးမယ်တဲ့။အပါယ်ဘုံဘ၀က နေ လူ့ပြည်ကိုရောက်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးလို့ဘုရားကဥပမာ
လူတွေဟာ လိုချင်တတ်မက်မှုလောဘ တွေနင့် ငွေကြေားဥစ္စာစည်းစိမ်တွေရသထက်ရဖို့ ချမ်းသာပြီး
မရောက်ဖို့ ကြိုးစားကြမယ့်အစား အပယ်ရောက်မယ့်တရားတွေကိုပဲလုံးပမ်းနေကြတယ်လို့တချို့ဆရာ
တော်ဘုရားကြီးများက ဂရုဏာနှင့်မိန့်တော်မူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားက အခါတပါးမှာ
မြတ်စွာဘုရားက မြေမှုန်အနည်းငယ်ကို လက်သည်းခွန်ပေါ်တင်ပြီးတော့ ချစ်သားတို့ ဒီလက်သည်းခွံ
ပေါ်က မြေမှုန်နှင့် ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်က မြေထု ဘယ်အရာက ပိုများသလဲဆိုတော့ ကမ္ဘာမြေရဲ့မြေထုက
ပိုများပါတယ်ဘုရားလို့လျှောက်ကြတယ်။ အဲဒီတော့ဘုရားက ချစ်သားတို့ မှတ်ထားကြ။လောကမှာ
သုဂတိဘုံ(လူ့ဘ၀)ကနေ သေပြီးပြီးသတ္တ၀ါတွေထဲမှာ သုဂတိဘုံကိုပြန်ရောက်တဲ့သတ္တ၀ါဟာ ဒီလက်
ပါပဲ။လောဘအလို ကြီးတိုင်းပိုတယ်လို့ဆိုတာပါ။ ဒီအာရုံနောက်ကိုလိုက်လို့ဘယ်တော့မှမပြီးပါဘူး။ပြီး
တော့ဘယ်အရာမှမမြဲပါဘူး။လောကမှာ မြူမှုန်လေးတမှုန်လောက်တောင် မြဲတာမရှိဘူးလို့မြတ်
ဒါကြောင့်ပုရပိုဒ်ကြီးကို ဘုရားက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားကိုးနိုင်တဲ့တရားရှိတဲ့အယူဝါဒကိုကိုးကွယ်ဖို့
တဲ့နောက် ကျင့်ကြံအားထုတ်လိုက်တာ ရဟန်းတာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပုရိတ်ပိုဒ်ဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကိုယ်
တော်တိုင်သက်တော်ထင်ရှား ရှိနေစဉ်မှာ နောက်ဆုံး ချွတ်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျနော်တို့တွေကိုယ့်
ရဲ့စိတ်ကိုသေချာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်လုပ်ပြီး တချက်လောက်စောင့်ကြည့်လိုက်တာနှင့် ဒီစိတ်
ဟာ ဘယ်လိုမှ ကိုယ်ခိုင်းသလိုမရပဲတရစပ်သူ့သဘောသူဆောင်ပြီးသွားချင်တဲ့ဘက်သွားပြီး တွေးချင်
တယ်။ဒီခန္ဓာငါးပါးဟာ တခုပေါ်တိုင်းအကုန်ပေါ်ပြီး အကုန်ပျောက်တဲ့အတွက် မြင်လိုက်လို့ သဘော
လုံးဟာ ဖြစ်ပြီးတိုင်း ပျက်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက် ငြိမ်းငွေ့စရာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သဘော
ပေါက်နားလည်ပြီး ၀ိပသနာတရားကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးသံသရာ ၀ဋ်ဆင်းရဲက လွတ်မြောက်အောင်
အားထုတ်သင့်ကြပါတယ်။ ဒီလိုကျင့်ကြံအားထုတ်ဖို့ဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသာနာ
တရားစစ် တရားမှန်၊ယုံကြည်ကိုးကွယ်စရာ အမှန်နင့်တွေ့နိုင်ကြပါစေ။
(ကျနော်နားလည်သလောက်သာ ရေးသားထားတာမို့ ပိုပြီးတတ်သိနားလည်တဲ့ သူတွေရဲ့ပြုပြင်သင်ပြ
Posted by သဇင်ရနံ့at 23:12 No comments:
မြန်မာတွေအများစုသိရှိနားလည်ထားခဲ့ကြပါတယ်။မူရင်းဂါထာအရတော့ အာရောဂျံ မိစ္ဆေ ပရမဉ္စလာ
ဘံ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။အလွန်မှန်ကန်တဲ့အဆိုအဆုံးအမတခု ဖြစ်တယ်လို့ကျနော်ကတော့ ယုံ
ကြည်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် လူတွေအတော်များများက သိရှိနားလည်ထားတာကို အသုံးချအကောင်ထည်
ဖော်ပြီး ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်အောင်တည်ဆောက်တဲ့။ တည်ဆောက်နိုင်တဲ့သူ သိပ်များလှ
ကခွင့်မပြုလိုရ၊အချိ်န်မပေးနိုင်လို့ဆိုတဲ့ အခြေအနေဖြစ်နိုင်သလို အခြေအနေက ခွင့်ပြုပါရဲ့နဲ့ကိုပဲ လှုပ်
ကျန်းမာနေတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ ကျန်းမာရေးရဲ့တန်ဖိုးကို အရေးကြီးမှုကို အလေးဂရုပြုသူတွေနည်းပါ
တယ်။ဘာလို့ဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေနှစ်ခုကြားက ကွာဟချက်
ရွက်မှုတွေကို သိပ်မလုပ်နိုင်တော့ ဒါမှမဟုတ်လုံးဝမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်ကျမှပဲလုပ်နိုင်သူတွေနဲ့ယှဉ်
ပြီး တန်ဖိုးကို နားလည်သဘောပေါက်လာတတ်ကြတာဟာ သဘာဝပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ခွဲခြားဖြစ်တည်လို့ မရနိုင်တာအသေအချာပါပဲ။အပြန်အလှန်မှီတည်နေကြတာဖြစ်တာမို့ လူတယောက်
ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်က မလုပ်နိုင်တာ ဖြစ်လာနိုင်သလို ခန္ဓာကိုယ်က လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း
ရှိပါရဲ့နဲ့စိတ်ကျန်းမာရေး ချို့ ယွင်းဖောက်ပြန်လို့ လုပ်လို့မရနိုင်တာမျိုးတွေ ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲလူ
တယောက်ဟာ ရုပ်ိုင်းအ၇ရော စိတ်ပိုင်းအရပါ ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိနေဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောကြရ
ဒါပေမယ့် ရုပ်ိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ဘယ်လိုလုပ်သင့်ကြတယ်
ဆိုတာကို ပြီးခဲ့တဲ့လထုတ် ဂျာနယ်မှာ ရေးသားတင်ပြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ စိတ်ပိုင်း
ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သုတေသနပြုသူတဦးရဲ့ ရေးသားတင်ပြုမှုတခုမှာ သူဟာ တနေ့ကို နှစ်နာရီ(မနက်တနာရီ၊ညနေ ၁နာ
ရီ)နေ့စဉ်(၁၀)ရက်တရားထိုင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။တရားထိုင်တာက သူ့ဘ၀ရဲ့အရည်အသွေးကို အပြောင်း
အလဲဖြစ်စေ၊မဖြစ်စေ၊ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုသူက လက်တွေ့ဖြတ်သန်း
ကြည့်တာပါ။ သူက အဲဒါက သူ့ဘ၀ရဲ့အရည်အသွေးကို အများကြီးအပြောင်းအလဲဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ
ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို ရရှိနိုင်တယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက လည်းဆိုပါတယ်။သူတေသန ပညာရှင်တွေ
ရဲ့အဆိုအရ တနေ့ ကိုမိနစ်(၃၀)လောက် သီတင်းပတ်ရှစ်ပတ် တရားထိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာ မှတ်ဥာဏ်၊
သာ ပြောင်းလဲမှုရှိလာတာကို တွေ့ခဲ့ရ ပါတယ်။အဲဒီအပြောင်းအလဲတွေကို ဇန်န၀ါရီလ(၃၀)ရက်နေ့
ထုတ် စိတ်ကုသမှု သူတေသန(Psychiatry Recharch:Neuroimaging) မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
သုတေသနမှာ ပါဝင်သူတွေကို တရားထိုင်စိတ်ကုသမှု အစီအစဉ်မစခင်နဲ့ ပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန် မှာဦး
နှောက်ရိုက်ကူးစစ်ဆေးမှုတွေက ဦးနှောက်ရဲ့လေ့လာသင်ယူမှုနဲ့ မှတ်ဥာဏ်အတွက် အရေးကြီးတဲ့အ
စိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ ဟစ်ပိုကင်းပတ်စ်(Hippocampus) ပိုင်းမှာ ဦးနှောက်တိုးများလာတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါ
ရိုက်ကူးစစ်ဆေးမှုက အပ်စဂ်ဒါလာ(Amygdala) လို့ခေါ်တဲ့သောက နဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ ဦး
နှောက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းမှာတော့ ဦးနှောက်လျော့နည်းလာတာကိုလည်း ပြနေပါတယ်။ တရားထိုင်မှုမ
လုပ်တဲ့အုပ်စုမှာတော့အဲဒီလို ပြောင်းလဲမှုမျိုး မပြပါဘူး။မန်ဆာချူးဆက် အထွေထွေဆေးရုံကြီးနဲ့ ဟား
ဗတ်ဆေးကျောင်းက စိတ်ပညာရှင်လည်းဖြစ် ဒီလေ့လာသူတေသနပြုမှုရဲ့ဦးဆောင်ရေးသားသူလည်း
ဖြစ်တဲ့ အရစ်တာဟိုဇဲလ်( Britta Hozel)က လေ့လာသုတေသနမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်သူတွေက (၁၉၇၀)
ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ စတင်တရားထိုင်ကြတဲ့နည်းဖြစ်တဲ့သတိကပ်တရား
မြစ်ကတော့ ရှေးဗုဒ္ဓ၀ါဒီတွေ အသုံပြုခဲ့တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမက“အဓိက အယူအဆကတော့လူတ
ယောက်ရဲ့ အာရုံကိုဦးတည်ဗဟိုပြုဖို့ ၀တ္ထုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို အသုံပြုတာပါပဲ။အဲဒါဟာ အသက်ရှူစဉ်၊
စိတ်လှုပ်ရှားစဉ်၊တွေးတောနေစဉ် ဒါမှမဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်ခံစားမှုတခုခုကို လေ့လာစးစိုက်နေတဲ့အချိန်
မှာ ရှိတဲ့ခံစားမှုကို ဗဟိုပြုစးစိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဒါဟာ စိတ်ကို စီးမျောမသွားရ
အောင် ဒီစူးစိုက်ရာနေရာကို အခုပြန်ရောကအောင်လုပ်တာပါပဲ” လို့ဆိုပါတယ်။ယေဘုယျအားဖြင့်တ
ရားထိုင်သူတွေဟာ ကုလားထိုင်တလုံးပေါ်မှာ မတ်မတ်ထိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ငြိမ်ငြိမ်လေး
ဒါပေမယ့် ဦးနှောက်ရဲ့သိပ်သည်းခြင်း တိုးများလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတိအကျပြောနိုင်ဖို့ကတော့မ
လွယ်သေးပါဘူး။ဒီနယ်ပယ်မှာ လေ့လောတွေ့ရှိထားမှုတွေက အဦးအစပိုင်းလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။
အရင်ကတွေ့ရှိထားချက်တွေကလည်း တရားထိုင်တာနဲ့မထိုင်သူတွေကြားမှာ ဦးနှောက်တည်ဆောက်
မှုမတူကွဲပြားတာတွေကို ပြဆိုနေပါတယ်။လေ့လာသုတေသန ပြုချက်ပေါင်း များစွာကတော့ အဲဒီဦး
နှောက်တိုးများလာမှုက ကျန်းမာပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ဘ၀ရဲ့အရည်အသွေးကို တိုးတက်လာစေတယ်ဆိုတာကို
တွေ့ရှိထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကို ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်
ဖို့ကတော့အမြဲတမ်းအခက်အခဲရှိပါတယ်လို့ဒေါက်တာဟိုဇဲလ်က ပြောပါတယ်။၂၀၀၈ခုနှစ်က လေ့လာ
တွေ့ရှိမှုတခုကတော့တရားထိုင်သူတွေဟာ ဒုက္ခခံစားနေ၇တဲ့ သူတွေရဲ့အသံကိုကြားရတဲ့အချိန်မှာသူ
“တယောက်ယောက် ဒုက္ခခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ကပိုပြီးကူညီချင်စိတ်ရှိလာနိုင်သလို ပိုပြီးသနား
ကရုဏာထားလုပ်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်” လို့ ဒေါက်တာဟိုဇဲလက ပြောပါတယ်။
တရားထိုင်တာနဲ့လူရဲ့ကျန်းမာပျော်ရွှင်မှုရဲ့ဆက်စပ်ပုံကို သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသန ပြုမှုတွေက အသေး
စိတ် တိတိကျကျ ဖော်ပြရှင်းလင်းဖို့ သိပ်မလွယ်ကူလှသေးပေမယ့် လေ့လာတွေ့ရှိပြီးအချက်အတော်
များများကတော့လူတယောက်ရဲ့ ကျန်းမာပျော်ရွှင်မှု စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သလို အ
ဆုတ်၊နှလုံးစတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပိုပြီး
ကောင်းမွန်လာစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြဆိုနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်ကျင့်ကြံ
ကြတဲ့သူတွေက အဲဒီအချက်ကို လက်ခံကြပါတယ်။အတွေ့အကြုံအရပေါ့လေ။
ငွေကုန်ကြေးကျလည်းမရှိဘဲ ရုပ်ပိုင်း၊စိတ်ပိုင်း ကျန်းမာရေးကို အတိုင်းအတာတခုအထိ အထောက်အ
ပံ့ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့အတွက် ကျင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့ရဟန်းသံဃာတော်
တွေကိုပဖြစ်ဖြစ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ နည်းနာသိတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် မေးမြန်းပြီးသူတို့တွေရဲ့ လမ်း
ညွှန်မှုနဲ့လက်တွေ့စမ်းသပ်နိုင်ကြသလို တရားထိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်စာတမ်းတွေကို ဖတ်ရှုလေ့
လာလိုပဲဖြစ်ဖြစ် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင် စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကျန်းမာပျော်ရွှင်မှုကိုခံ
ဆရာစိုးနေလင်း ၏ နိုက်တင်ဂဲလ် မဂ္ဂဇင်းပါ ဆောင်းပါးကို မူရင်းအတိုင်းဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ဆရာ့
Posted by သဇင်ရနံ့at 21:47 No comments:
Really Useful English Idioms 11
be there for ရဲ့အီဒီယမ် အသုံးအနှုန်းက be ready to help လို့ပြောပါတယ်။အဓိပ္ပါယ်ကတော့
see eye to eye ဆိုတာ agree လို့အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့အီဒီယမ်စကားလုံဖြစ်ပါတယ်။တခုခုကိုကိုယ်နင့်သ
give and take ဆိုတာက compromise and cooperation ဖြစ်ပါတယ်။အပေးအယူလုပ်လို့ရတယ်
ဒီစာပိုဒ်လေးကိုဖတ်လိုက်ယင် အီဒီယမ်လေးတွေကို အသုံးအနှုံး တွေနှင့်တကွ မှတ်မိသွားတာပေါ့။
A good friend(သူငယ်ချင်းကောင်းတယောက်ဆိုတာ)
- is someone who will always be there for you when you need them.
သင်အကူအညီလိုတဲ့အချိန်မှာ သူ(သူမ)ဟာ အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ရှိတယ်။
- is someone who sees eye to eye with you on most things.
သင်နှင့်အတူ စိတ်သဘောထားတူညီတဲ့လူကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
- is not perfect and not the same as you,but is good at give and take.
အစစပြည့်စုံပြီးတော့သင်နှင့် အ၇ာရာတိုင်းမှာ တထပ်တည်းကျ တဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒါပေမယ့်
သင်နှင့် အပေးအယူ၊အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ရတဲ့သူ၊ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်လို့ရတဲ့သူ၊ သင်နင့်ပူးပေါင်းဆောင်
Posted by သဇင်ရနံ့at 17:01 No comments:
မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုကျ အောင်မြင်ကြီးပွားကြောင်းသြ၀ါဒရတနာများ ၅
မိမိရဲ့အပြစ်ကို အမှန်အတိုင်းပြောဆို ညွှန်ပြလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို “ရွှေအိုး” ရှိရာညွှန်ပြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လို့ သဘော
ကောင်းတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့ အပြစ်ပြောလာရင်တော့ ဒါကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာမလိုပါဘူး။
သံသရာခရီးသွားနေကြတဲ့အခါ ဖြစ်လေရာ ဘ၀တွေမှာ အမျိုးမြင့်မြတ်လှပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘ၀မှာ
အတိတ်ဘ၀တုန်းက ကြီးသူကိုရိုသေ၊ရွယ်တူကိုလေးစား၊ ငယ်သူကို သနားပြီး ကိုယ့်ကိုကို နိမ့်ချတတ်
သူတွေဟာ ဒီဘ၀မှာ အမျိုးမြတ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။
တနေ၀င်တော့မည်။တနေ၀င်သော် နေအိမ်နှင့်ရွာကို ပစ်လျက်က စီးပွားနင့်ဝမ်းစာတို့ ရှာမှီးရာ စား
ကျက်ဘက် ခရီးထွက်ခဲ့ကြသူများအဖို့ အိမ်နှင့်ရွာကို တခါပြန်ကြရပေအုံးမည်။လူ့ဘ၀သည် ကံရိက္ခါ
မှီးရာစီးပွားရေးစားကျက်တည်း။လူ့ဘ၀သည် ဈန်ဝမ်းစာ ဥာဏ်ဝမ်းစာ ရှာမှီးရာ အကွက်တည်း။
“နတ်၊လူ၊သတ္တ၀ါတွေ ဘေးရန်ကြောင့်ကြ ဆင်းရဲကင်း၍ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ”
လို့အချိ်န်ရှိတိုင်း စွဲစွဲမြဲမြဲ မေတ္တာပို့တာပါပဲ။
ဒီမေတ္တာတန်ခိုးတွေကြောင့် ဘုန်းကြီး အသက်ရှည်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အခုကာလဟာ ရတနာတောင်တန်းကြီးကို ဘွားကနဲ မြင်တွေ့ နေရသလိုပါပဲ။မြေကြီးနည်းနည်းအပင်
ပန်းခံလှန်လိုက်ရင် သိန်းသန်းကုဋေတန်တဲ့အဖိုးတန်ကျောက်တွေ တွေ့နိုင်တာပဲ။အပင်ပန်းမခံချင်လို့
လမ်းဘေးက တွေ့ကရာကျောက်ဖြုန်းလေးတွ ကောက်ပြီး ကျေနပ်နေကြပြန်ရော မခက်လား။
အကောင်းလောကဓံ နဲ့ တွေ့ရင် တကြွကြွ တမော်မော် ပျော်မဆုံးနိုင် ဖြစ်မိကြမှာပဲ။အဲဒီအတွက်
ဣနြေ္ဒပျက်ခြင်းတွေ ဖောက်ပြန်ခြင်းတွေ ဖြစ်ရလို့ တုန်လှုပ်ခြင်းပဲ။ဒါတွေဟာ မင်္ဂလာမဖြစ်ပါဘူး။အ
ဆိုးလောကဓံ နဲ့ကြုံရတဲ့အခါ စိတ်ဆင်းရဲရခြင်း ၀မ်းနည်းညှိုးငယ်ခြင်းတို့ ဆိုဖွယ်မရှိ အမင်္ဂလာသာဖြစ်
လောကဓံ တရားကို မတုန်လှုပ်ခြင်းသည် မင်္ဂလာ ဖြစ်တယ်။
လူတယောက် ဟာအသက်ရှင်နေတုန်း ဒဏ်ရာ အနာတရ ဖြစ်ရင် မကောင်းဘူး။သီလထိန်းရင်တော့
စိတ်သန္တာန်မှာသသနာ အသက်ရှင်နေတယ်။ဒါပေမယ့် အဖြစ်အသေးအဖွဲ့သင့်မှုဆိုတဲ့ ဒဏ်ရာ ဒဏ်
Posted by သဇင်ရနံ့at 22:43 No comments:
Really Useful English Idioms 10
Really Useful English Idioms 10 ကစပြီး Social relations နှင့်ပတ်သက်တဲ့အသုံးအနှုံးတွေကို
push the boat out ရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုအဓိပ္ပါယ်က spend more than usual ဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်တာ
small talk ဆိုတာ polite converstion about unimportant things ဖြစ်ပါတယ်။အလှူ၊မင်္ဂလာ
အိမ်တွေမှာတယောက်နှင့်တယောက်အခုမှစတွေ့တဲ့လူချင်းတွေ အလာပ သလာပတွေပြောကြတာ
hit it off ကတော့ like each other ဖြစ်ပါတယ်။စကားစမြည်ပြောကြရင်းတယောက်နင့် တယောက်
I went toabig party last night.The hosts were celebrationg something so they'd decided
to push the boat out:there wasareally good band,fantastic food and lots of drink.I
chatted toafew people for the first hour-just the usual small talk. Then I met this
great guy.We got talking and we really hit it off.I'm seeing him tomorrow!
Posted by သဇင်ရနံ့at 22:09 No comments:
ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဗိုက်ချပ်ချင်နေတာနင့် အမျိုးသားတွေ ဘယ်လိုဗိုက်ချပ်အောင်လုပ်လဲဆို
ဗိုက်ချပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ လှချင်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ အဓိက ကတော့ အပြင်သွားစရားတခု
ခုရှိလို့အ၀တ်အစားလေးဘာလေး လဲတော့မယ်ဆိုယင် ဘောင်းဘီပြသနာက အတော်တက်တာဗျ။ခါး
နည်းလမ်းမသိရင်တော့ အမျိုးသားတွေအတွက် ၀မ်းဗိုက်အဆီကျဖို့ဆိုတာ တော်တော်ခက်ခဲတယ်လို့
ထင်စရာပါ။တကယ်က ၀မ်းဗိုက်အဆီကျအောင် လုပ်နဲ့နည်းတွေက သိပ်အခက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။အ
ရေးကြီးတာက ဒီနည်းတွေကို စွဲစွဲမြဲမြဲနဲ့ရေရှည်လုပ်နိုင်ဖို့ပါ။
ဘယ်သူမှတော့ အစာမစားပဲ နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့်ဝမ်းဗိုက်အဆီကျဖို့ဆိုပြီး မနက်စာညစာတ
ခုခုကို မစားပဲနေကြပါတယ်။အဲလိုလုပ်ရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်(mtabolism) တွေနှေးကွေးသွား
ပြီး အဆီတွေပိုပြီးစုသွားနိုင်ပါတယ်။အစာတနပ်မစားနိုင်တဲ့အတွက် နောက်တနပ်ကျရင် ၂ဆလောက်
နေစဉ်မှာ ခန္ဓာကိုယ်က အစာမစားထားတဲ့ပုံစံ (starvation mode)ဖြစ်နေလို့ ကြွက်သားတွေကိုဖြိုခွဲပြီး
လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်ကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် အိပ်ယာကနိုးတဲ့အချိန်မှာ မနက်စာချက်ခြင်းစားဖို့
လိုပါတယ်။ကြွက်သားတွေကို အသုံးပြုထားရတဲ့အတွက်မနက်စာစားတဲ့အချိန်မှာလဲ အသားဓာတ်များ
လောက်စားမိလဲဆိုတာ သတိပြုပြီး မှတ်သားထားပါ။အဲဒီလိုလုပ်တဲ့သူတွေဟာသတိလက်လွတ်စားတဲ့
သူတွေထက် အဆီပိုကျလေ့ရှိတယ်လို့ သုတေသနတွေက ဆိုပါတယ်။
အမျိုးသားတွေကိုတော့ အားကစားတခုခုလုပ်ဖို့ အမြဲလိုလိုအကြံပေးနေရတာပါ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားရ
တဲ့အားကစားတခုခုလုပ်မှ လူကလန်းဆန်းတက်ကြွနေမှာပါ။အရေးကြီးတာက အားကစားလုပ်တဲ့အ
လေ့အကျင့်ရှိဖို့ပါ။ဘောလုံးပွဲ၊တင်းနစ်ပွဲတွေကို တီဗီကနေထိုင်ကြည့်မယ့်အစား ကိုယ်တိုင်ဝင်ကစား
သကြားလုံး၊ကိတ်မုန့်၊ ကွစ်ကီးစ်၊အာလူးကြော်၊၀က်သား၊ဆိုဒါတွေကို ရှောင်ပါ။ဒီအစားအစာတွေက
၀မ်းဗိုက်မှာ အဆီစုစေသလို သွေးတိုး၊နှလုံးရောဂါတွေဖြစ်ဖို့လဲ အားပေးပါတယ်။ အစားထိုးတဲ့အနေနဲ့
အသီးအရွက်သုတ်၊ဟင်းသီးဟင်းရွက် နဲ့ အဆီမပါတဲ့ အသားကိုပဲစားပါ။ဘီယာရှောင်ဖို့ကတော့ပြောဖို့
ကြပါတယ်။တစုံတရာတော့ အကျိုးရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဒီတမျိုးတည်းနဲ့တော့ ၀မ်းဗိုက်ချပ်ဖို့ခက်ပါတ
တယ်။ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးကို သုံးပြီးလုပ်ရတဲ့ Pilates လိုလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကိုလုပ်ပါ။ဗိုက်ကတော့ချပ်ပြီး
ဖြင့်အမျိုးသားတွေမှာ ကယ်လိုရီ၂၅၅၀ နေ့စဉ်လိုအပ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေမှာတော့၁၉၄၀လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အ၀လွန်ာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ တခါစားရင် သိပ်အများကြီး မစားမိဖို့ သတိထားရမှာပါ။ဒီ
လိုပဲ ခန္ဓာကိုယ်က အစားမစားထားတဲ့ပုံစံ (starvation mode) ဖြစ်မနေဖို့ နည်းနည်းပဲစားတာမျိုးလဲမ
၀မ်းဗိုက်အဆီကျဖို့ ပိန်ဖို့ဆိုတာတွေကတောနည်းလမ်းတွေက ရှိုပြီးသားပါ။ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့လူနေ
မှုပုံစံကိုမပြောင်းနိုင်၇င် ဒီနည်းတွေကို လိုက်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။နောက်တခုက စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်ဖို့လဲခက်ပါတ
တာနက်သုံးရင်သုံး၊ဒါမှမဟုတ် တီဗီကြည့်ရင်ကြည့် တခုခုလုပ်နေကြတာ များတာကိုး။စာရေးသူကိယ်
တိုင်လဲဝမ်းဗိုက်အဆီချဖို့ ကြိုးစားရဆဲပါ။အစားအစာကို သတိထားစားပေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့က
တခြားဗာရီယ ကိစ္စတွေနဲ့ အမြဲမလုပ်နိုင်လို့ပါ။ဒါပေမယ့် ၀မ်းဗိုက်အဆီသိသိသာသာ မကျေသေးပေ
မယ့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ရက်ပိုင်တွေမှာ လန်းဆန်းပေါ့ပါး နေတာကတော့ အမှန်ပါပဲ။
ဒေါက်တာဥာဏ်ပေါ် ၏ ဘားမီးကလပ်စေ့ ပေါ်မှဆောင်းပါးကိုပြန်လည်ဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by သဇင်ရနံ့at 12:50 No comments: